HomeNewsदेशभर ४७ हजार ६१७ जनाको उम्मेदवारी दर्ता
काठमाडौं, वैशाख १२ गते। वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सोमबार साँझ ५ बजेसम्म ४७ हजार ६१७ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले आइतबार र सोमबार दुई दिन मनोनयन दर्ताका लागि समय दिएको थियो।
निर्वाचन आयोगका अनुसार महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाका प्रमुख पदमा एक हजार ६२३ र उपप्रमुख पदमा ९५२ जनाको उम्मेदवारी परेको हो। गाउँपालिकाको अध्यक्षको पदमा एक हजार ६०६ र उपाध्यक्ष पदमा एक हजार ४५ जनाको उम्मेदवारी परेको आयोगले विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी गराएको छ।
आयोगका अनुसार देशभर वडाध्यक्ष पदमा १२ हजार १५१ जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने वडा सदस्य पदमा १६ हजार चार जनाको उम्मेदवारी परेको छ। त्यस्तै, महिला सदस्य पदमा सात हजार ५९९ र दलित महिला सदस्यमा छ हजार ६३७ जना रहनुभएको छ।
See also भर्खरै आयो दुखद खबर : भारतमा आगलागीमा परी १४ वर्षीय नेपाली किशोरको ज्यान गयो
Previous articleआज सोमबार, कसरी भगवान शिव शंकरलाई खुःशी बनाउँने ?
Next articleतपाइँको दाँत पहेंलो भयो ? चम्काउन यस्तो उपाय अपनाउनुस् ! Dental Care